musha > Travel Europe > Best Cities In Europe For Shopping By Train
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 20/11/2020)
New zvinotiwira chinangwa chakaisvonaka chevatariri. zvisinei, dzimwe nguva tourist-ushamwari kuona haagoni kuchengeta kenduru kuti kutenga spree, pasinei fadza. Vanhu vanoshanyira nokuda kunotenga kuzviziva, uye pane sezvinei zvakawanda maguta Europe apo vanogona bongozozo zvavo mari pfungwa.
zvisinei, kuti vane mari yakawanda uye simba akaenda kunotenga, chinhu chakanaka pfungwa yokuti kufamba chipa asi kutsanya. Kusvika zvakanakisisa maguta Europe kuti kunotenga nechitima anozadzisa zvose izvozvo. Ngatidyei timboona mamwe mikuru kunotenga dzokugara uye sei unogona kuwana ikoko nechitima:
Kunotenga muAmsterdam, Netharenzi
Amsterdam anozivikanwa zvinhu zvizhinji, uye kunotenga ayo nzvimbo tiri mumwe wavo. The guta inopa rwakasiyana-siyana zvinoitwa kunotenga uye mavanga, zvichienderana huru sei bhajeti yenyu iri. Kana uri kutsvaka vamwe upscale kunotenga, ari P.C. Hoofstraat ndiwo mugwagwa kwamuri. Nokuti dhipatimendi zvitoro uye zvitoro, unogona rova ​​De Bijenkorf, Magna Plaza kana Kalvertoren.
De Negen Straatjes kana The Nine Streets vari zvakare mukuru vatengi vaishandisa kana uchida kuona zhinji zvitoro siyana uye zvitaera pakarepo. Unogona kusvika Amsterdam nechitima nyore kubva mumaguta akawanda makuru European, kusanganisira Paris uye Copenhagen.
Kunotenga muMilan, Italy is our Fashion pick for Best Cities in Europe for Shopping
Milan inoverengerwa pakati pemaguta akanakisa muEurope ekutenga nekutenda kunofungidzirwa seguta guru remafashoni. zvisinei, Milan harisi chete pamusoro The Fashion uye mukuru-mumigwagwa fashoni munharaunda Duomo. Kune vakawanda dzimwe nzvimbo kuongorora, kubva kuzvitoro zvine hunyanzvi mudunhu reBrera kusvika kune zvinonakidza nzvimbo munzvimbo yeNavigli. zvirokwazvo Milan ari shopper kuti paradhiso. Kana uri vanonakidzwa nawo, unogona kuenda Milan nyore nechitima kubva kuRoma, Venice, uyewo mamwe maguta Europe.
vatengi vaishandisa ruzivo rudo Zurich, kunyanya vaya vanogona kuita zvakanakisisa ayo zvitoro zvikuru zvinodhura. Zurich ndomumwe yakanakisisa mumaguta Europe nokuda kunotenga nokuti anonzwa zvakasiyana pane metropolises dzakawanda. The Sihlcity kutenga nzvimbo uye yezvitoro Glatt havasi guru kunotenga dzezvitoro muri pamwe kushandiswa, asi vanoita kupa unhu chitoro ruzivo.
Other chinozikamwa hotspots zvinosanganisira Bahnhofstrasse, Europaallee, uye nharaunda yakapoteredza Langstrasse, kunyanya kana uchida tarisa Swiss uye mumaguta patani. Kudzokera ikoko nechitima zviri nyore kubva Berlin, Munich, Vienna, nemamwe maguta makuru eEurope.
Geneva kuna Zurich TrainS
Berlin, Germany ari pakati Best Cities mu Europe nokuda Shopping
Berlin unoruramisa zita rimwe yakanakisisa mumaguta Europe kuti kunotenga wayo guru chitoro maruwa apo unogona kuwana chinenge chinhu. Nokuti vaya vane muhomwe zvakadzama, Kurfurstendamm kana "Ku'damm" kunokosha-kushanya, apo vaya tighter bhajeti Achawedzera vane rwendo kuna Tauentzienstrase. Somunhu mukurumbira European rwendo uye guta guru, Berlin iri nyore tichironga nechitima kubva mamwe maguta akawanda muEurope.
Chimwe chezvinhu kuti Antwerp rakasiyana kunotenga-akachenjera raro nyika yakakurumbira nedhaimani weruwa. zvisinei, Antwerp doesn’t lack designer and mazambiringa zvitoro, zvenhaka zvitoro kana mune chipatapata misika kana. Rinogona rakasiyana ruzivo kune vatengi vaishandisa zvose, kunyange avo kuti vakaoma kufadza. Unogona kusvika Antwerp nechitima kubva Berlin, Paris, uye mamwe maguta Europe.
Agadzirira vamwe kunotenga zvikuru vamwe zvakanakisisa mumaguta Europe? Ronga rwendo rwenyu, uye bhuku rako chitima matikiti mangwanani!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kuchinja / kuna / of kana / kuti ru uye mimwe mitauro.
#traveleurope europetravel kunotenga nezvitima